DAAWO;-Maamulka Gobolka Gabiley Oo Dhagax Dhigay Wado Afar Haad Ah, Dumiyayna Guriyo Dhisan Oo Wadadu Ku Hagaagtay | Gabiley News Online
DAAWO;-Maamulka Gobolka Gabiley Oo Dhagax Dhigay Wado Afar Haad Ah, Dumiyayna Guriyo Dhisan Oo Wadadu Ku Hagaagtay
GABILEY(W,N)-Badhasaabka Gobolka Gabiley Oo Ay Weheliyaan maayarka magalada gabiley,maayarka Xuxigeenka xoghayaha dawlada hoose iyo xildhibaano katirsan golaha deegaanka gabiley ayaa maanta dhagax dhgay wado Afar haad ah oo isku xidhi doonta Maskid Jaamaca Gabiley Ilaa shariif cali taasi oo muhiim u ah isku xidhka magaalada .
Sidoo kale Dawlada Hoose Ee Gabiley Ayaa dumisay sedex guri Oo wadadu ku hagaagtay kuwaasi oo dadkii lahaa guryahani loo Celiyay lagactii hantidooda kuwaasi oo goob joog ka ahaa Duminta guryahooga iyaga oo ku faraxsan horumarka gabiley.
Maayarka Magalada gabiley,maayar kuxigeenka iyo Xildhibaano katirsan golaha deegaanka oo faah faahin ka bixiyay muhiimada wadadan ay uleedahay bilicda magaalada .
Dhanka Kale waxaa dhagax dhiga wadadan goob joog ka ahaa Cuqaasha iyo Madaxdhaqameedka G, gabiley kuwaasioo maayarka gabiley iyo xildhibaan golaha deegaanka ku amaanay Horumarka ay wadaan iyo dhismaha wadadan oo muhiim u ah fiditaanka magaalada gabiley.
Badhasaaba gobolka gabiley ayaa dhankiisa ka hadlay muhiimada ay bulshada uleedahay wax wada qabsiga iyo isku duubnidu isagoo umahad celiyay dadkii lahaa guryahan la dumiyay oo sifiican u aqbalay awaamiirka maamulka.